Ithegi: indlela ye-wordpress | Martech Zone
Ithegi: indlela yokubhala ngegama
NgoLwesibini, Novemba 26, 2019 NgoLwesibini, Novemba 26, 2019 Douglas Karr
Xa usebenzisa indawo yakho yeWordPress kwenye indawo yokubamba kwaye kufuneka uyihambise kwenye, ayisiyonto ilula njengokuba ucinga. Yonke imeko yeWordPress inezinto ezi-4… iziseko zophuhliso kunye nedilesi ye-IP ebanjelwe kuyo, kwindawo yogcino lwedatha ye-MySQL equlathe umxholo wakho, iifayile ezilayishiwe, imixholo kunye neeplagi, kunye neWordPress uqobo. I-WordPress inendlela yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle, kodwa ithintelwe kumxholo uqobo. Ayigcini ingqibelelo yombhali, kwaye ayenzi njalo
I-WordPress yamashishini amancinci
NgoMgqibelo, Septemba 8, 2012 NgoMvulo, Februwari 1, 2016 Douglas Karr
Ngelixa kukho itoni yabantu kushishino elityhala iWindowsPress, kunokuba nzima kwishishini elincinci ngaphandle kwe-tech savvy ukwenza imeko yabo ye-WordPress. Le infographic enkulu ehamba nomntu okanye iqela kuyo yonke into ekufuneka beyiqonde kunye nokuseta xa becwangcisa kunye nokwenza indawo yabo yeWordPress. Ndiyayithanda le infographic kuba ifuna ukuba umsebenzisi acofe kwi-microsite esebenzayo ukuze abone